Waligalan Alaa Galan – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWaligalan Alaa Galan
Mahabuub Abbaa Waajii | Gurraandhala 18, 2018
Yaroon Oromoon “waligalan alaa galan” jattee makmaakte Oromoonni biyyaa fi qa’ee isaanirraa fagaataani deemani tahuu baachu mala. Haalli amma Oromoonni diaspora keessa jiran yoo laalamee makmaaksi kun kan yaroo ammaa itti jirruf makmaakamee tahuu hin olu nama jachisiisa.
Waggootaa fi rakkinoota dhibbaa ol kessa dabree Oromoon biiftuu bilisummaa halaalaa arkaa jira. Yaroo murtessituu taate kanatti waliif obsuu fi waliigaluun akka biiftuun halaalaa mul’attu tun walakkaa Oromiyaa gayudhaan roga Oromia maraa ibsitu taasisa.
Obsa waliif qabaachun yaroon isaa amma! Jaarmayooni siyaasaa fi namoottan adda-addaa yaadaa fi tarsiimoon rakkina gabrummaan Oromoo ittin furamu dandaya ja’aani lafa kaayyatan garaa garumaa qabaachun isaa kan beekkamu. Haatahu malee, Oromooni hundinu gabrumaa jalaa akka bahu qabnu irraatti walii galan (shared interest). Kanarraatti hundaa’un walin hojjachuuf dhimmi gabroomfataan erga nurraa ka’een booda hojjatamu qaburratti waliif obsuun guddaa barbaachisaadha. Oromiyaan osoo hin gabroomneen durattis ni turte, erga bilisoomteen boodattis waan jiraattuuf jacha dura diinni akka nutti hin deebinetti ifirraa kuffisuun barbaachisaa taha. Erga diinni nurraa ka’een booda akkamitti Oromoo fi Oromiyaan ful-dura jiraachu qaban gaaffi ja’uf sammuu bilisa tahee fi tasgabbaaween wal marihachuun tarsiimoo irra caalaa waan taheef ammaaf dhimaa saniratti walif obsun barbaachisa dha.
Walif obsuun gara waligalutti nama ceesisa. Diaspora kana kessatii yaroo heddu wanti Oromoon irratti wal dhabnu yoo gadi fageenyaan laalamee dhimma hundee dhaan garaagarumaa qabu osoo hin tahin – yaroo gabrummaa walin madaalamu – waantoota wali obsu dhaan irra aanamuu dandaayamu tahani mullatan. Umama tahee dhalootni hundumaa rakkinoota yaroo isaani qaban waan taheef Oromoonni nu dura darbaanis rakkinoota yaroo saani qabaachaa turun isaani waan tilmaamamu. Yaroo Oromoon wagaa 400 ol Sirna Gadaa dhaan if bulchaa turan fi yaroo dina kenyaa walin Oromoon wallo wagaa dheeraa dhaaf loolun mohaa turan rakkinoota osoo hin qabaatin miti kan jiraatan. Rakkinoota isaani xixiqqoo akka ittin furataniratti waligalu dhaan malee. Waligaltee isaaniitiin sirna addunyaaratti fakki tahee fi kan haqaa ummachu dandaayan. Silaa obsaa fi waligalteen yaroo san hin jiraanne tahee Sirni Gadaa dhaabbatufis tahee yaroo dheeraadhaaf ittiin buluun hin dandayamu ture. Kana waan taheef, Oromoon diaspora kessa jirru waliigaluudhaan humna waliif tahuun yaroon isaa gesseetti. Waligalan Alaa Galan!
Waliif obsuudhaan yoo gabrummaarraa bahuratti waliin hojjachuuf waligalame, carraa fi rakkinoota yaroon tun fiddee bareechani hubachuu fi tarkkaanfi yaroo waliin deemu fudhachun barbaachisaa taha. Ammaan tana yaroon kan Oromoon bilisummaa dhaaf diina waliin wal-qabdee guyyaarraa guyyaa dhaan gara mo’ichaa deemaa jirtu waan taheef qabsoon itti fufuun waan barbaachisaadha. Gara kaaniin imoo fakkessaa fi sodaachisa dinaatiin sobamani qabsoo irraa dhaabachun akka dinni tarsimoo fi humna harayaan gadi bahu taasisa. Kana waan taheef, yoo Oromoon diaspora dura waligaluu dhaan humna tokko tahee of qopheesse diina kuffisufis tahee dhimma san boodaafillee shoora gudaa tabachu dandaya.
Waligalteen biyya walaba taate kessatti tahun murni cufaatuu ni mooha. Dhibbaa takkan maletti yoo Oromoon diaspora walin hojjatani mootumaa kana kuffisu ratti waligalan fadhi isaanitin waan waligaltee taasisanif qaamotni hundumaa yaroo motumaan Wayyaanee kuftee walin injifatan. Kana qofa osso hin tahin Oromoonis akka ummataatti moohee jachu dha. Erga motummaan kufteen booda Oromiyaatti galani waligaltee taasisun yoo dandayameelle harka tokkon rakkinoota TPLF waggoota 27f xaxxaa turte furuudhaaf yaalii gochaa harka tokkon masaanu biyya tenyaa fudhachu barbaadani walin morki taasisu waan qabnuuf tarsiimoon san kan bu’aa isaarra midhaan isaa heeddummaatu tahee mul’ata. Kanaafu, yaroon yaroo adda addaan akkamalee ittin arifatani tarkaanif Oromoo gaaga’u fi akka malee if booda harkisachun tarkaanfii carraa arkamtee tana nama dhabsiisu fudhatan osoo hin tahin waliigaluu dhaan bakka takkaa sosohun barbaachisaa taha. Tarkaanfiin waliigaluudhaan fudhatamulleen kan waan hundumaa (cost/benefit) xiinxale tahu qaba!